Date My Pet » 5 Actionable Soso-kevitra mba hisarihana ny vehivavy ny Dreams
amin'ny Bill mitady
Saro-kenatra ve ianao eo anatrehan'ny vehivavy ary tsy mahasarika azy ireo?
No mijaly eo ambanin'ny matoky teo anoloan'izy ireo?
Misy vaovao tsara ho anao. Tsy ianao irery no mahatsapa toy izany koa. Toy ny hoe malaza mandeha
“Ny vehivavy dia toy ny mazes, raha mahatakatra azy ireo, azonao izao tontolo izao”.
Ny tantara tamin'ny vehivavy:
Foana aho iray amin'ireo lanky sy tsy misy ilana ry zalahy mandritra ny sekoly ambaratonga faharoa taona. Tsy fantatro izay tokony holazaina na hatao mba ho olo-malaza amin'ny vehivavy.
Ny hany fanontaniana izay nisy fiantraikany ahy foana dia ny fomba hisarihana ny vehivavy? Ny namana rehetra manodidina tamiko dia nanana vehivavy sakaizany mihitsy aho raha manao ny dingana voalohany mba hangataka ny tovovavy avy.
Voalohany aho, nijaly noho ny tahotra ny fandavana. Taty aoriana dia indro fa ny ankamaroan'ireo ankizivavy manodidina ahy dia efa miroso, ka noho izany aho amin'ny safidy.
Nitohy hitranga elaela mandra zokiko nanome ahy toro-hevitra vitsivitsy. Nanaraka azy ireo aho, ary avy hatrany dia nahazo laza eto ankizivavy.
Amin'izao fotoana izao, Manana vady, ary efa mitondra ny datin 'ny vehivavy maro isan-karazany. Ny zavatra niainany amin'ny vehivavy no nanao ahy manazava manam-pahaizana ao amin'ny fahaiza-hisarihana ny vehivavy. Ny sasany amin'ireo toro-hevitra izay koa dia afaka manampy anao amin'io lafiny io dia manaraka.
Natoky no tena tia sy nankasitraka ny vehivavy. Tokony handeha lasa ny vehivavy rehetra tamin'ny toky toe-tsaina.
Ny fifanakalozan-kevitra lafy ratsin-javatra izany dia manaporofo fa mijaly amin'ny sarotra ho ambany kosa dia lehibe lavitra noho ny vehivavy.
Vehivavy tahaka ny olona dia afaka miankina amin'ny. Dia toy izany no, miezaka foana mba hahazoana antoka fa ny vehivavy hahafantatra fa ianareo no mahery sy ianteherana. Ny fiderana tena kely dia afaka manampy mba hisarihana ny vehivavy.
2. Fankasitrahana ny vehivavy:
Ny vehivavy tena tia compliments. Izany angamba no tsara indrindra sy be mpampiasa indrindra fomba niezaka mba hisarihana ny vehivavy.
Afaka midera azy teny an-dalana dia toa, teny an-dalana izy mandeha, lahateny, akanjo na tsiky. Raha tsorina dia, na inona na inona ianao dia midera azy ny hahatonga ny sambatra.
Be dia be ny vehivavy tena tia ny compliments momba ny hatsaran-tarehy anaty. Noho izany dia afaka ny hanandrana ny vehivavy complimenting amin'ny malefaka sy be fitiavana ny natiora, be fitiavana sy ny fo, ary toy izany ny zavatra hafa avy hatrany hahazo ny sainy.
3. Henoy tsara:
Iray fototra samy hafa ny lehilahy sy ny vehivavy dia, raha ny olona hiteny anareo momba ny olana, dia manantena anao ho tonga amin'ny vahaolana mety.
Na izany aza, ny vehivavy rehefa hiteny anareo momba ny olana, izy fotsiny ianao te hihaino ny zava-manahirana sy manjoretra aminy.
Ny vehivavy loatra na tsy liana momba ny vahaolana ho an'ny zava-manahirana. Noho izany, dia afaka misarika azy ireo fatratra tamin'ny fotsiny izany mihaino tsara sy ny mampindrana ny sofinareo rehetra mety ho azy ny hoe. Izany no hahatonga azy ireo hieritreritra fa tena tia sy miahy azy ireo.
4. Manome azy ireo fanomezam-pahasoavana:
Fanomezam-pahasoavana ho sambatra indrindra ny vehivavy. Ny iray manan-danja indrindra ny valin 'ny fanontaniana ny fomba manintona ny vehivavy dia ny hanome azy ireo isaky ny azo atao fanomezana fotoana. Araka ny vehivavy, ny fotoana tsotra toy ny voalohany mikasika tokony hankalazaina.
Ary noho izany, Nanoro hevitra ianareo mba hitandrina ny diary ny mba hampahatsiaro anareo ny daty ho kely indrindra ny zava-mitranga. Omeo ny vehivavy fanomezam-pahasoavana mba hankalaza isan-kerinandro na isam-bolana nankalazany ny fahatsiarovana ny zava-nitranga ireo mba hisarihana azy ireo avy hatrany.
5. Aoka ianao ho chivalrous:
Herim-po dia tena sarobidy ny vehivavy rehetra manerana. Ataovy azo antoka fa tsy hanadino ny tsipiriany kely ny herim-po toy ny hoe manokatra ny varavarana ho azy fiara na niandry izy mandra-mipetraka amin'ny hotely mba hisarihana azy. Mifalia amin'ny azy na oviana na oviana, na hafa ny vehivavy teo anatrehany. Izany dia hanampy anao mba hanana ny tena fahatsapana mahery vaika ny vehivavy tianao Woo.
Iray famaranana hevitra momba ny fomba manintona ny vehivavy dia ny maneho azy ireo ny lafiny fihetseham-po. Vehivavy matanjaka sy emotionless tia avy hatrany an'ireo lehilahy ireo angano.
Ny vehivavy rehetra tia ny lehilahy iray izay no hitomany teo an-tsorony. Ary noho izany, isaky ny azo atao, mampiseho azy ny lafiny fihetseham-po.
Ento any amin'ny tantaram-pitiavana sarimihetsika, fahazavana labozia fiaraha-misakafo. Efa niezaka ny nanao izany dia nahazo daty maro aza ny fiainako rehetra.
Na izany aza, ny fomba wooing sy hisarihana ny vehivavy mitovy amin'ny vehivavy iray hafa. Araka ny tokony ho famaritana hanampy ahy tsara hitari-dalana anao amin'io lafiny io ka misalasala manontany fanontaniana fanampiny.
To dia, Best ny vintana!